सुनसरीमा नमुना मतदान गरियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सुनसरीमा नमुना मतदान गरियो
सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१ मा प्रकाशित !
इनरुवा, जेठ २२ गते । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले बदर मत कम गर्न जिल्लाको एक स्थानमा आइतबार नमुना मतदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले कोसी गाउँपालिकाको नहर चोकमा नमुना मतदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । गाउँका स्थानीयलाई मतदान गर्न सिकाउने र बदर मत कम गर्ने उद्देश्यले कोसी गाउँपालिकाको नहर चोक मतदान केन्द्रमा नमुना मतदान गरिएको हो ।
कोसी गाउँपालिकाको श्रीपुरजद्वीका ४५ अग्निपीडितलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको हो । उनीहरुलाई धुवाँ कम आउने र छिटो रुपमा खाना पकाउन सहज होस् भनेर चुलो वितरण गरिएको बताइएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया फेरी सर्यो
NEXT POST Next post: आयोगको निर्णय सच्चाउन माग आयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:२१